सबैभन्दा धेरै धन भएका १० बलिवुड अभिनेत्रीहरु ! - समृद्ध नेपाल
सबैभन्दा धेरै धन भएका १० बलिवुड अभिनेत्रीहरु !
एउटै फिल्मबाट करोडौं कमाउने बलिउडका हिरोइन फिल्मको साथसाथ दोस्रो कारोबारमा पनि जोडिएका छन । जहाँबाट उनीहरुको कमाई हुन्छ । यहाँ बलिउडका सबैभन्दा धनी हिरोइनहरुको बारेमा बताइएको छ । बलिउडमा हालसम्म सबैभन्दा बढी कमाउने तथा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडेका १० अभिनेत्रीहरु को हुन र उनीहरूको सम्पति कति छ ? आज हामी यो जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौ ।
३ अमिषा पटेल
५ दीपिका पादुकोन
६ अमृता राव
९ मल्लिका शेरावत
१० प्रियंका चोपडा
अफ्रिकी गायिकाले गाइन नेपाली चर्चित गीत ‘फूलबुट्टे सारी’ !
३ पटक पोइला गएकि श्रीमति फर्काएर ल्याए तर नानीको बानी नै उस्तै, फेरि धोती न टोपी बनाएर गएपछि
हावाहुरीसहितको असिना पानीका कारण खेतीबालीमा ठूलो क्षति !
महाविर पुनको आविश्कार केन्द्रलाई बाँदर धपाउने मेशिन बनाउने थलो : दिल निशानी
गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका !
उदयपुर त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक समुहबाट रमेश रसाईली उठ्ने !
गौहर खान आफु भन्दा ११ वर्ष कान्छा प्रेमी जैदसंग भोली विवाह गर्दै !
पूर्व मिस वर्ल्डलाई बसले ठक्कर दियो !